रामचन्द्रजी र सशांकजी पार्टी सभापति बन्नै सक्नुहुन्नँः सुजाता (भिडियोसहित) « रिपोर्टर्स नेपाल
रामचन्द्रजी र सशांकजी पार्टी सभापति बन्नै सक्नुहुन्नँः सुजाता (भिडियोसहित)
काठमाडौं, २३ असोज । नेपाली काँग्रेसकी प्रभावशाली नेता सुजाता कोइरालाले वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल पार्टी र महामन्त्री सशांक कोइराला पार्टी सभापति बन्नै नसक्ने ठोकुवा गरेकी छिन् । उनले पौडेल र कोइरालासँग पार्टी हाँक्ने क्षमता नभएको तर्क गरिन् ।
‘रामचन्द्रजी र सशांकजीले नेपाली काँग्रेस हाँक्न सक्नुहुन्नँ,’ पूर्वउपप्रधानमन्त्री समेत रहेकी कोइरालाले प्राइम टाइम्स टेलिभिजनमा ऋषि धमलासँगको अन्तवार्तामा भनिन्, ‘रामचन्द्रजीको सानो सोच र मुटु छ, सशांकजीको लाइफस्टाइल सभापति बन्न लायक छैन ।’
पौडेल असफल भइसकेको र पत्रपत्रिकाले मात्र उचालेको टिप्पणी गरिन् । उनले भनिन्, ‘उहाँले अब थाहापाउनुहुन्छ ।’
पौडेल सिद्धान्तको मात्र कुरा गर्न काम नगर्ने स्वभावको भएको आरोप लगाइन् । उनले भनिन्, ‘गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई दुःख दिनुभयो, सुशील कोइरालालाई दुःख दिनुभयो । रचनात्मक काम गर्नुहुन्नँ दुःख मात्र दिनुहुन्छ ।’ पौडेल नेता नभएकाले आफूले नेता नमान्ने बताइन् । उनले भनिन्, ‘रामचन्द्रजीसँग म छैन, नेता मानेर हिंड्न सक्दिनँ । नेता होइन भनेर फूलबुट्टा भरेर राख्न सक्दिनँ ।’
सशांक कोइराला आफू केही काम नगर्ने र अरुलाई जिम्मा लगाएर पन्छने स्वभाव भएको टिप्पणी गरिन् । उनले भनिन्, ‘वीपीको छोरा भन्दैमा कसैले भोट दिदैनन्, काम हेरेर भोट दिन्छन् ।’ सशांक कोइरालाले काम गर्नै नसक्ने भएकाले आफूले समर्थन गर्न नसक्ने बताइन् ।
सशांक कोइरालाले एउटा कुरा बोल्ने र त्यही कुरा खण्डन गर्ने गरेको बताइन् । उनले भनिन्, ‘हिन्दु राष्ट्र भन्ने अनि भनेको छैन भन्ने ? राजा ल्याउनुपर्छ भन्ने अनि भनेको छैन भन्ने ? उहाँमा कुनै अडान छ्रैन ।’